Public Health in Myanmar: Events Unrelated to Public Health ???
it's short but good. i like the last sentence.
စာဖတ်သူတယောက်အနေနဲ့ သတိထားမိတာက ဒုတိယအကြိမ် ဖတ်တဲ့အချိန်မှာ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အချိန်က မပါပဲ ထပ်ဖြည့်ထားတဲ့ စာပိုဒ်တွေကို တွေ့ရပါတယ်။ အပေါ်မှာ ပေးထားတဲ့မှတ်ချက်က ထပ်မဖြည့်ခင်က အချက်အလက်အပေါ်မှာ ပေးထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက စာဖတ်သူတွေအပေါ် အသိအမှတ်ပြူစေချင်တယ်။
တင်တာ အဆင်မပြေလို့ တစ်ပိုင်းပဲ ပါသွားတာပါ။
ဒီပို့စ်ကို တင်တာ ၄ခါလောက် ပြင်ယူရတယ်။
ဘာမှ ပြန်မရေးလဲ စာဖတ်သူတွေကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။
ပျင်းလို့ ပြန်မရေးတာလို့ မှတ်ယူစေချင်ပါတယ်။
ဘာပြောပြော အပြောခံတဲ့သူလို့ မှတ်ထားလို့ ရပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပြောချင်တာ ပြောခွင့်ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ထားတဲ့သူပါ။